doremi – Page 3
Home » About doremi (Page 3)
Lexux ＧＳ　Year 2006 July Model
Lexus ＧＳ | doremi | 2013年11月22日
The Lexus GS isaseries of mid-size/executive cars sold by Lexus, the luxury division of Toyota. It was sold as the Toyota Aristo in Japan from 1991 to 2004. D...
Lexus ＧＳ　Year 2006 March Model
137485 total views, 1 today
Eleven Rack guitar/audio interface
DTM, Multi Effect, Music Instruments, Recording,PA,DJ | doremi | 2013年11月21日
What is Eleven Rack + Pro Tools? Eleven Rack + Pro Tools isahardware/software bundle that provides the ultimate recording and amplifier emulation solution fo...
133236 total views,2today
T.C Electronic G Natural( Accoustic Multi Effect)
Multi Effect, Music Instruments | doremi | 2013年11月18日
Electrified By Acoustics We love acoustic guitars - they are the purest expression ofaguitarists creativity - the wood, the strings and that's it: natural be...
161180 total views,0today
Honda Fit | doremi | 2013年11月15日
The Honda Fit, also known as the Honda Jazz, isasubcompact car produced by the Japanese manufacturer Honda from 2001 to present. It was first introduced in Ju...
Multi Effect, Music Instruments | doremi | 2013年11月14日
Presets for 16 body types and 28 models restore the original sonic characteristics of acoustic guitars that pickups cannot capture. By selecting the body and mo...
161633 total views, 1 today
Boss AD-8 (Acoustic Guitar Processor)
Guitar | doremi | 2013年11月13日
The BOSS AD-8 Acoustic Guitar Processor uses COSM modeling technology to transform the piezo pickup sound of an ordinary acoustic into six high-end acoustic gui...
131297 total views,0today
doremi | guitarist | 2013年11月29日
The Swede’s superfast “neoclassical” style — he credits Bach and Paganini as influences — isablur of scales and technical precision. It almost makes you forget that the great bulk of his music is so fast that it’s unlistenable.
1 votedvote vote
Page’s guitar sounds like six guitars, and the heaviness of his right hand is key to the instant recognizability of Led Zeppelin’s sound.
Fluent in every blues style, Clapton is probably best known as the king of the Tulsa Sound. He’s also among the most melodic of guitarists, using his solos to moveasong along instead of stopping it cold.
A remarkably precise player who had to put up with more crap from his lead singers than any other guitarist on this list. Does he make the cut partially because of the hat? Yes. Yes he does.
The greatest of all time? Maybe. No one merged the blues, rock and psychedelia with as much ease or wieldedaguitar with as much charisma.
အခု​ဆို ယူ​အက်စ်​အေ​မှာ အသက်​ရာကျော်​သူ​တွေ ၁​၀⁠၀​၀⁠၀ ကျော် ၂​၀⁠၀​၀​၀ နီးပါး​ရှိ​တယ်။ တီ​ဗွီ​အင်တာဗျူး တစ်​ခု​မှာ တွေ့​လိုက်​ရ​တာ​က နေထိုင်​ကောင်း​ကြ​ပြီး သွား​နိုင်​လာ​နိုင်​တွေ​ပါ။ သူ​တို့​တွေ​ထဲ​က အချို့​ဟာ တင်း​နစ်​တို့ စ​ကွပ်ရှ်​တို့​တောင် ရိုက်​နေ​ကြ​တာ​လို့ ဆို​တယ်။ ကိုယ်​ပိုင်​အလုပ်​ဖြစ်​ဖြစ် အခြား​အလုပ်​ဖြစ်​ဖြစ် ပရဟိတ လုပ်​ငန်း​ဖြစ်​ဖြစ် ချိန်​ပြည့် ချိန်​ပိုင်း လုပ်​နေ​ကြ​သူ​တွေ​လည်း ပါ⁠ပါ​တယ်။ ဘယ်​လို​မှ အသုံး​မ​ဝင်​တော့​တဲ့ ဖိုး​သုည​ကြီး​တွေ မဟုတ်​ကြ​ပါ​ဘူး။ ဘယ်​သူ့​ကို​မှ ဝန်ထုပ်​ဝန်ပိုး ပေး​နေ​ကြ​သူ​တွေ မဟုတ်​ကြ​ဘူး။ လူ့​ဂုဏ်​သိက္ခာ​နဲ့ နေ​နိုင်​ကြ​သူ​တွေ​ပါ။ နောက်​အခြား​တိုင်း​ပြည်​က လူအို​တစ်​ဦး​က​ဆို အသက် ၉​၄ နှစ်​အရွယ်​မှာ ပီ​အိပ်ခ်ျ​ဒီ​ဘွဲ့​ကို အောင်မြင်​စွာ ဆွတ်​ခူး​နိုင်​ခဲ့​တယ်။ ဒီ​တော့ လူအို​အားလုံး​ဟာ လူ့​အဖွဲ့​အစည်း​ကို ဒုက္ခ​အဝ​ဝ​ကို ပေး​နေ​တဲ့ ခဲ​ဆွဲ​ကြီး​တွေ မဟုတ်​ကြ​ပါ​ဘူး။ သူ​တို့​ကို အသုံး​မ​ဝင်​တော့​တဲ့ ဘဝ​ကို မြန်⁠မြန်​မ​ရောက်​အောင် ကျန်​တဲ့​လူ​တွေ​က ဝိုင်းဝန်း​ဖေးမ လုပ်​ပေး​ရ​မှာ။ ဒီ​လို​သာ လုပ်​ပေး​နိုင်​လျှင် လူအို​တွေ​ကို ပေး​သင့်​တဲ့ အကူအညီ​ကို ပေး​နေ​လို့ ကောင်းကျိုး​တွေ ပြု​နေ​ရုံ​တင် မက​သေး​ပါ​ဘူး။ လူ့​အဖွဲ့​အစည်း တစ်​ရပ်​လုံး​အတွက် ကောင်းကျိုး​ပြု​နေ​တာ​ပါ။ သူ​တို့​သာ ကိုယ်​ထူ​ကိုယ်​ထ ဘဝ​မှာ နေ​သွား​နိုင်​လျှင် လူ​မှု​အဖွဲ့​အစည်း တစ်​ခု​လုံး​အတွက် ဘယ်လောက် တာဝန်​တွေ ပေါ့သွား​လိုက်​မ​လဲ။ ဒီ​လို​အတွေး​ရှိ​ပြီး လူအို​တွေ အို၊ နာ၊ ချည့်​တွေ မြန်⁠မြန်​မ​ဖြစ်​အောင် လုပ်​ပေး​ရ​မယ်။ လုပ်​ပေး​နိုင်​တာ​တွေ​လည်း ရှိ​ပါ​တယ်။ မြန်မာ​မှာ​လည်း လွန်​ခဲ့​တဲ့ အနှစ်​တစ်​ရာကျော်​က ဒေါ်​ဦး​ဇွန်း​မင်း​ကွန်း​မှာ လူအို​ရုံ စ​တည်ထောင်​စဉ်​က ပထမ​ဦး​ဆုံး လာ​နေ​တဲ့ ဘိုး​ဘွား​အို​တွေ​မှာ အသက် ၉​၄ နှစ်​နဲ့ ၈​၀ ကျော်​တွေ​ပါ⁠ပါ​တယ်။ သူ​တို့​က​လည်း ကျန်း​ကျန်းမာ​မာ သွား⁠သွား​လာ⁠လာ​တွေ​ပါ။ သူငယ်ပြန်​သူ​တွေ မဟုတ်​ပါ​ဘူး။ ဝိပဿနာ တရား​ထိုင်​ခြင်း​ကို လုပ်​နေ​ကြ​တာ​ပါ။ တရုတ်​ပြည်​မှာ​ဆို အသက် ၁​၀​၄ နှစ်​အရွယ် အဘွား​အို တစ်​ဦး​ဟာ ကျန်းမာပကတိရှိ​ပြီး တစ်​ယောက်​တည်း နေ​တယ်။ လုပ်​စရာ​ရှိ​တာ အားလုံး​ဘာသာ လုပ်​တယ်။ နောက်​အဘိုး​အို အဘွား​အို စုံ​တွဲ​က​လည်း သူ​တို့​နှစ်​ဦး အသက်​ပေါင်း​လိုက်​လျှင် ၂​၀​၈ နှစ်​လောက်​ရှိ​တာ၊ ဘယ်​သူ့ အကူ​မှ​မ​လို​ဘဲ နေ​နိုင်​ကြ​သ​တဲ့။
CIF ဈေးနှုန်း ပြောင်းလဲမည့် သတင်းကြောင့် ကားဈေးကျ
doremi | 未分類 | 2013年11月22日
Written by ဇင်​မာ
မော်တော်​ယာဉ်​များ​ကို ထုတ်​လုပ်​သည့် မော်​ဒယ်လ်၊ ခု​နှစ်​အလိုက် ဆိပ်ကမ်း​အရောက် တန်ဖိုး သတ်​မှတ်ချက် (Cost Insurance Freight- CIF) နှုန်း​များ မြင့်​တက်​မည် ဟူ​သော သ​တင်း​များ​ကြောင့် ကား​ဝယ်​ရောင်း ဈေး​များ ဆက်တိုက် ကျ​ဆင်း​နေ​ကြောင်း သီ​ရိ​မင်္ဂလာ ဈေး​ဟောင်း ကား​ဝယ်​ရောင်း ပွဲစား​တန်း​မှ ဝါ​ရင့် ကား​ပွဲစား ဦး​အောင်ကျော်​က နိုဝင်ဘာ ၁​၅ ရက်​၌ မြန်မာ​သံတော် ဆင့်​သို့ ပြော သည်။
ပြည်​ပ​မှ မော်တော်​ယာဉ်​မှာ​ယူ တင်​သွင်း​ပါ​က ကား​ထုတ်​လုပ်​သည့် ခု​နှစ်၊ မော်​ဒယ်လ်​အလိုက် သတ်​မှတ် ထား​သည့် CIF နှုန်း​ထား​အလိုက် အကောက်​ခွန် ဦးစီး​ဌာန​သို့ ပေး​သွင်း​ရ​ပြီး အဆို​ပါ​နှုန်း​ထား​မှာ နှစ်စဉ် ပြောင်းလဲ​လျက် ရှိ​သည်။
Zoom g3 multi-effect (197400 views)
Zoom A3 (Accoustic Multi-effect DI) (161633 views)
Epiphone DR-100 Sunburst (159765 views)
Eleven Rack guitar/audio interface (133236 views)
DoremiCafe (132832 views)
LAG Guitars (T66DCE) (132832 views)